အစဉ်အမြဲအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနေထိုင်ခြင်း - ကရွေးချယ်ဖို့လောက်အောင်ထိုက်တန်သလား |
ဒူဘိုင်းအတွက် Blockchain အတွက်အကောင်းဆုံး Certificate ဘာတွေလဲ?
အစဉ်အမြဲနေထိုင်ခြင်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု 1978 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့ပြီးဆုရဖို့, ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်လိုချင်သူမည်သူမဆိုကူညီပေးဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်, ဒါကြောင့်ယခု multi-ဒေါ်လာဘီလီယံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် Forever သန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူ စီးပွားရေး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပိုင်ရှင်များ။
ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, ဒါဟာထာဝစဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လွယ်ကူပါတယ်။ များစွာသောအခြားမတူဘဲ ကွန်ယက်ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများသည်မရှိနှစ်စဉ်ကြေးနှင့်မျှမတို့သေးငယ်တဲ့ပုံနှိပ်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ဤတစ်လူသိများတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သင်တစ်ဦးရှိသည်လိမ့်မယ် သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကြီးထွားခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆျောမှမြင့်မားသောအခွင့်အလမ်း.
အစဉ်အမြဲနေထိုင်ခြင်းရှိပါတယ် ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျော် $ 1.5 ဘီလီယံအထိ နှင့်တစ်သမတ်တည်းကုန်သွယ်၎င်း၏ 41 နှစ်တာကာလအတွင်းကြီးထွားလာနေတဲ့ငွေသားကြွယ်ဝကြွေးမြီ-အခမဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
160 ကျော်နိုင်ငံများရှိဦးခေါင်းရုံးများနှင့်အတူထာဝစဉ်ကဖြစ်နိုင်သမျှလူတွေကိုတစ်ဦးဆောက်လုပ်ဖို့အတှကျကိုနိုင်ငံတကာအခြေခံအဆောက်အအုံရှိပါတယ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ အမှန်တကယ်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူတစ်ဦးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကိုအုပ်စိုးအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေက.
ထာဝစဉ် Living နဲ့ကျန်နေတဲ့ဝင်ငွေ Build
ထာဝစဉ်ရဲ့ Living ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအကြိုးခံစားခှငျ့တစျခု Network ကို ကတည်ငြိမ်ပြီးရေရှည်တည်တံ့ဝင်ငွေကမ်းလှမ်းကြောင်းအကျိုးဆက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်။ သင်လုပ်နိုင်သည် ကော်မရှင်ဝင်ငွေ အတွက်ထာဝရစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအပေါ် ဒူဘိုင်း.
ထိုအခြေအနေများ, သင်နှင့်သင့်အဖွဲ့သည်စီးပွားရေးမှမိတ်ဆက်နှင့်အစဉ်မပြတ်အသီးအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မည် သင့် hard အလုပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများ။ ယခင်ကဖော်ပြထားခဲ့သည်အတိုင်း, ဒီကုမ္ပဏီကိုစတင်ကိုင်တွယ်ရန်ကောင်းလှ၏။ ဒါကြောင့်အဲဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာ, သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်ရေရှည်မှာမြျှောလငျ့နိုငျသောအရာကိုကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ.
အဆိုပါထာဝစဉ်များကိုစတင်ရောင်းချ Plan ကိုအဘယ်သူအားမျှမှဒုတိယဖြစ်ပါသည်
uncapped ဝင်ငွေအလားအလာ, မက်လုံးပေးကမ်းလှမ်း - ငွေသားဆုကြေးငွေအပါအဝင်နှင့် ပင်ဒူဘိုင်းမှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးသွားလာ။ ထိုမှတပါး, အံ့သြဖွယ်ရေရှည်ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးအမြတ်နှင့် ကောင်းသောဘဝအတှေ့အကွုံ။ ထာဝစဉ်က၎င်း၏ရိုးရှင်းများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများ Living သင်ထိန်းချုပ်မှုယူခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့င်; အဆိုပါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်အလုပ်မလုပ်ခြင်း, ရလဒ်များကိုကြည့်ပါ။
ကောင်းပြီ, ဒီကုမ္ပဏီရကျိုးနပ်သည် ရေရှည်များအတွက်ပါပေးရ, မယ့်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ပြည်သူ့ယေဘုယျအားဖြင့်ပေးခြင်း5ကြယ်ပွစကားပြောအပေါငျးတို့သလူမှုမီဒီယာအပေါ်သုံးသပ်ပြီး။ ဒါကြောင့်, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတှငျနထေိုငျ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော ငွေရှာဖို့ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်း.
အစဉ်အမြဲထုတ်လုပ်ရောင်းချ ပရီမီယံကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာထုတ်ကုန်အဆိုပါစင်အရည်အသွေးကိုရှားစောင်းလက်ပတ်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ သာလွန်အရည်အသွေးကိုရှားစောင်းလက်ပတ်ထုတ်ကုန်များ၏မတူကွဲပြားထုတ်ကုန်အကွာအဝေးအားလုံးတစ်ဦးနှင့်အတူလာ 60 ရက်ကြာပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်.
အစဉ်အမြဲထုတ်ကုန်များ၏နေထိုင်မှုရဲ့ကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေး, အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဲဒီမှာကိုဆိုလိုသည်တကယ်ရှိပါတယ် ဖောက်သည်များအမျိုးအစားအားလုံးကိုအဘို့ထုတ်ကုန်:
အချိုရည်များနှင့် Gels ။
ထာဝစဉ်တစ်ခုနှင့်အတူသာမန်လူတွေကထောက်ပံ့ အခွင့်အရေး ငွေရေးကြေးရေးအလုံခြုံဖြစ်ခြင်းထင်ရနိုင်သောနေရာတစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျမိမိတို့အဘို့တစ်ငွေရေးကြေးရေးအလုံခြုံအနာဂတ်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အောင်မြင်ရန်အလွန်ခက်ခဲ.
ဤတွင်ထာဝစဉ်မှာ ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း အမှန်တကယ်အလားအလာ, ဆဲအောင်မြင်ရန်နိုင်ဖြစ်ခြင်းနေတုန်းတစ်ခု uncapped ဝင်ငွေနှင့်သက်သေရလာဒ်များနှင့်အတူ ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်-ဘဝချိန်ခွင်လျှာ လူတိုင်းအောင်မြင်ရန်ကြိုးပမ်း။
ထာဝစဉ်ဒူဘိုင်းအတွက် Living အလုပ်လုပ်စတင်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
သငျသညျထာဝစဉ် Living ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ချင်လျှင်ပြုပါကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဦးဖြစ်လာရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ။ အထူးသဖြင့်သင် United Arab တွင်အလုပ်ရှာလျှင် စော်ဘွား။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီနဲ့အတူရှိနေတယ် သင်ပိုမိုလေ့လာစူးစမ်းကူညီရန် အဆိုပါထာဝစဉ်, သင်ကလူ FBOs ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအပေါ်စတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မည်သို့ပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုနိုင်မည့်အကြောင်းကို အစဉ်အမြဲခရီး.
ဤကုမ္ပဏီသည်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု။ သင်အမှန်တကယ်ရနိုင်သည် ကမ်ဘာပျေါတှငျနီးပါးမည်သည့်အရပ်မှစိတ်ဝင်စားဖို့အခွင့်အလမ်းများ.
ဒါဟာကမကထတစ်ခုသို့မဟုတ်အစီအစဉ် join ဖို့အခြားသူတွေရတဲ့ထံမှအကျိုးကျေးဇူးများကိုကတိပေးသဖြင့်ငွေပေးချေရန်မည်သူမဆိုဆွဲဆောင်ဖို့ကုန်သွယ်အစီအစဉ်အတွက်ပါဝင်သူများအတွက်တရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုကိုအလွယ်တကူအောင်မြင်ဖြစ်ကြောင်းတောင်းဆိုမှုများအားဖြင့်လမ်းလွဲမယူကြနှင့်။ ထာဝစဉ်ဗြိတိန်အတွက်တိုက်ရိုက်ရောင်းချသူများအသင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး, ရေခြားမြေခြားအခွင့်အလမ်းများ.
Shah ကနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ - ထာဝစဉ်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်
ထိုမှတပါး, ထာဝစဉ် Living ယခု ညီညွတ်သောအာရပ်အတွက်ကူညီပေးနေကလူ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်။ Shah က Hadi, ထာဝစဉ်ကို Global Living ၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အလိုတော် ကာတာနိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းအတွက်အသစ်တခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်သင်ကူညီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒီတော့ဒါကိုစိတ်ထဲထားပြီး၊ သင်ယခုရနိုင်သည် လမ်းပြသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်။